isivumelwano: Zonke iiwotshi ezibukele i-nike + uthotho lweemodeli ezi-3 ngoku zikhutshiwe ngama-20%
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Zonke iimodeli ze-Apple Watch zeNike + Series 3 ngoku zingama-20%
Idili: Zonke iimodeli ze-Apple Watch zeNike + Series 3 ngoku zingama-20%
Phambi kwesibhengezo sikaSeptemba 12 Apho silindele ukuba ii-iPhones ezintsha kunye nee-iPads zityhilwe, abalandeli abafuna i-smartwatch kufuneka bathenge uhlelo olukhethekileyo Uthotho lwee-Apple 3 ngexabiso eliphantsi kune-usuak.
UNike uhlala ethengisa Kwiimodeli zayo ze-Apple Watch Series 3, kodwa kunqabile ukuba sizifumane zonke izaphulelo zithengisiwe. Ngexesha elilinganiselweyo, zonke iimodeli ze-Apple Watch Nike + Series 3 ngama-20% zitshiphu kwivenkile ekwi-intanethi yeNike & apos. Ukuze ufumane isaphulelo se-20%, abathengi kufuneka basebenzise ifayile ye-ISIHLOMELO 20ikhowudi yokukhupha ngexesha lokuphuma.
Ixabiso eliphantsi Apple Jonga iNike + Uthotho 3 I-smartwatch, emva kokufaka isaphulelo sama-20%, iindleko ezijikeleze i-265 yeedola, ngelixa eyona ibiza kakhulu ifumaneka nge-345 yeedola.
Gcina ukhumbula ukuba akukho mahluko wehardware phakathi kweApple Watch Nike + Uthotho 3 kunye nemodeli yesiqhelo, kodwa eyokuqala iza neNike Band, ubuso bewotshi ekhethekileyo yeNike, kunye nokudibana okusondeleyo Uhlelo lokusebenza lweNike + Run Club . Kwakhona, iimodeli zeNike + zifumaneka kuphela kwiinguqulelo ze-aluminium, kunye neglasi ye-Ion-X.
umthombo: Nike nge 9ukus
yeyiphi eyona moto ifanelekileyo
I-iphone 8 ngokudibanisa okanye inqaku 8
uyivula njani inqaku leVerizon 2
I-PET, TPU, okanye iGlass enomsindo - yonke into ekufuneka uyazi ukukhetha umkhuseli wescreen
Unonophelo: eli khonkco levidiyo liza kuphazamisa i-iPhone yakho!
I-Galaxy S9 ibetha isantya sokukhuphela i-5G kwinethiwekhi yangoku ye-LTE
I-Galaxy Note 20 Ultra yifowuni yokuqala ene-Gorilla yeGlass yeGlasi
Isamsung izisa ukufunyanwa kokuwa kunye nezinye izinto zeGlass Watch 3 kwiGlass Watch Active 2 endala
I-Galaxy S20 Ultra 108MP vs 12MP kunye ne-S20 + 64MP vs 12MP-Ngaba ukudubula kwi-megapixels ephezulu kufanelekile?
Uwabhala njani amaBali oMsebenzisi we-Agile elungileyo